कलेज छान्दा बिचार पुर्‍याउनुपर्ने तथ्यहरू - eNepalikhabar.com
गृह कलेज छान्दा बिचार पुर्‍याउनुपर्ने तथ्यहरू
3 July, 2017 BY प्रा डा मनप्रसाद वाग्ले
विद्यालयको जग बलियो नभए उच्च शिक्षामा राम्रो गर्न सकिन्न । त्यसले तपाईंको पूरै भविष्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले एसएलसीमा प्राय विषयहरु सबै साधारण विषय भए पनि कक्षा ११ मा तपाईंले ५ वटा विषयक्षेत्र मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
ती ५ विषय क्षेत्र हुन्– मानविकी, शिक्षा, बाणिज्य, बिज्ञान र प्रविधिक । अंग्रेजी र नेपालीबाहेक अरु सबै विषय त्यही विषय क्षेत्रसंग सम्बन्धित हुन्छन् । आ–आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न सके अब तपाईंको पढाई भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सफल हुनेछ ।
तर बिचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने माथि भने झैं तपाईंको क्षमता र रुचीमा विषय छनौट भरपर्छ नकि कसैले ‘तिम्रो त ए प्लस वा ए आएको रहेछ, किन बिज्ञान नपढ्ने ?’ भनेको भरमा वा साथीहरुको लहै–लहैमा ।
फेरि अचेल त एउटा फेसन नै भएको छ आफ्नो मिल्ने साथी जुन कलेजमा गयो आफू पनि त्यहीं जाने । यसले राम्रो काम गर्दैन । तपाईंको र तपाईंको साथीको रुची फरक हुन सक्छन् र क्षमता पनि ।
यस्तो अवस्थामा एउटाले राम्रो गर्दा अर्कोले पनि राम्रै गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन है । पछि पुर्पुरोमा हात लाउनुभन्दा अहिल्यै बिचार गरौं । कतिपय बाबुआमालेसमेत आफ्ना सन्तानको क्षमता नबुझी ‘यो पढे राम्रो हुन्छ’ भनेर दबाब सृजना गरेको भेटिन्छ, जुन ठिक होइन ।
कुन विषय किन र कसले पढ्ने भन्नेबारे सुझावमूलक संदेश तल दिइएको छ । यो नै सम्पूर्ण होइन । तर यसरी बिचार गरेर अघि बढ्न सके राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह चाहिं हो ।
‘तपाईंको भाषामा राम्रो दखल छ । लेखन कला राम्रो छ । सामाजिक विषयमा सानै कक्षादेखि राम्रो प्रगति देखाउनु भएको छ । समाजको उत्थानमा केही गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ । राष्ट्रको राजनीति, भूगोल र इतिहासमा बढी रुची छ ।
भोलि गएर देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिन मन लागेको छ । अभिव्यक्तिशील कलामा चाख छ ।’ यदि यस्तो हो भने भने तपाईंको भविष्य मानविकी विषय क्षेत्रभित्रै छ ।
यो पढाईप्रति रुची राख्ने र त्यसैलाई आफ्नो कार्यपथ बनाउनेहरु कवि, साहित्यकार, अनुवाद्कर्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिकर्मी, संचारकर्मी, कलाकर्मी, सिमानाबिद, भौगोलिक सूचना प्रणाली बिज्ञ, शिक्षक, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, मानवशास्त्री, समाजशास्त्रीजस्ता बिभिन्न बिज्ञ हुन सक्छन् र त्यसको बजार नेपाललगायत विश्वमा प्रशस्त छ । अब आफ्नो क्षमता पहिचान गर्नुहोस र निर्णयमा पुग्नुहोस ।
वाणिज्य वा व्यवस्थापन
‘तपाईं व्यापार व्यवसायमा रुची राख्नुहुन्छ । आफ्नो काम आफैं सृजना गर्छु र अरुलाई मेरो संस्थामा रोजगारीसमेत दिन्छु भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ । लेखा प्रणाली, श्रेस्ता व्यवस्थापनजस्ता कुरामा चाख दिनुहुन्छ ।
तपाईंमा वित्तीय साक्षरताको खुबी छ । आर्थिक लगानीका आधारमा सेवा र नाफामूलक व्यवसायप्रति तपाईंको चाख छ । भविष्यमा बैंकिंग क्षेत्रमा लाग्ने सोख छ । यसभन्दा अगाडिका पढाइमा गणित, लेखा, अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा तपाईंको राम्रो अंक आएको छ ।
भोलि गएर कुनै कम्पनि वा संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य छ । साथीहरुको समूहमा तपाईंले टोली नेता भएर काम गरिसक्नु भएकोछ । अहिलेनै आफ्नो कोठा, भान्छाघर, बाथरुम, पुरै घर, वरिपरिको वातावरणजस्ता कुरामा चुस्तता प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ । उमेरले सानै भएपनि गार्हस्थ्य वा कुनै संस्थागत मामिलामा तपाईंको रायले निकै मद्धत गरेको महसुस गर्नु भएको छ ।’
यदि यस्तो हो भने तपाईंको भविष्य बाणिज्य क्षेत्रभित्रै छ । यो पढाईप्रति रुची राख्ने र त्यसैलाई आफ्नो कार्यपथ बनाउने मानिसहरु खासगरी बैंकिंग क्षेत्र बिज्ञ, व्यापारव्यवसाय बिज्ञ, स्वरोजगारकर्ता, कुनै पनि प्रकारको संस्थामा व्यवस्थापन बिज्ञ, निजी कम्पनी संस्थापक, वाणिज्यदूत, पारबहन बिज्ञ, बजार व्यवस्थापक आदि भएका छन् । यसको बजार नेपाललगायत विश्वमा प्रशस्त छ र यो बढ्दो क्रममा छ ।
‘तपाईंको वाककला राम्रो छ । तपाईं तथ्य र तर्कसहित अरुको चित्त बुझाउन सक्षम हुनुहुन्छ । तपाईं सधैं केही न केही नयाँ कुराको खोजी र प्राप्तीमा लाग्नुहुन्छ । अनुसन्धानमा तपाईंको रुची छ । तपाईं आफूले पाएको ज्ञानमा नयाँ ज्ञान मिसाएर आफूभन्दा सानालाई दीक्षित गर्न सक्नुहुन्छ । सामाजिक सेवामा तपाईंको सोख छ । तपाईको लक्ष्य भविष्यका कर्णधारलाई शिक्षित गर्नु रहेको छ । नयाँ प्रविधि उपयोग गरेर यो देशकै शिक्षाको स्वरूप बदल्न सक्छु भन्ने आँट गर्नुहुन्छ । योजनाबद्ध क्रियाकलापमा तपाइंको रुची छ । नैतिकता, सदाचार, स्वयंसेवा, तपाईंका बिशेषता हुन् र आफ्नो र अरुको निष्पक्ष प्रगति मूल्यांकनमा तपाईंको सोख छ । तपाईं सिकाईलाई जीवनपर्यन्त सिकाईसंग जोड्न खोज्नुहुन्छ र अहिलेको शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने तपाईंको चाहना छ । शिक्षाकै माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्नु हुन्छ ।’
यदि यस्तो हो भने तपाईंको भविष्य शिक्षा क्षेत्रमै छ । यस्ता मानिसहरु शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा स्रोतव्यक्ति, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद, अनुगमन–मूल्यांकनविद, पाठ्यक्रमविद, शिक्षा निकायका प्रमुख, परिक्षाबिद, सहजकर्ताजस्ता व्यक्तित्व भएका छन् र अझ आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पकड राख्ने मान्छेहरु बजारमा तानातानको अवस्था समेत छर अहिले विश्व बजारमा यस्तो व्यक्तित्वको माग अधिक छ र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि सम्पूर्ण रोजगारीको आधा भन्दा बढी रोजगारी यसै क्षेत्रमा छ ।
‘तपाईंको रुची वरपरको वातावरण र रुख बिरुवाप्रति छ । मानवसेवालाई आफ्नो पेशा बनाउन चाहनु हुन्छ । भोलि गएर म चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान गर्छु भन्ने सोच्नुभएको छ । म निर्माण कार्यमा राज्यलाई योगदान पुर्‍याउछु भन्ने लागेको छ ।
अनुसन्धानमा रुची राख्नु हुन्छ । अधिकतम समय आफ्नो पढाईलाई दिन सक्नु हुन्छ । भोलि गएर विभिन्न प्रविधिक विधामा डिजाइनर बन्ने सोख छ । कम्प्युटर, विद्युतीय विधा, यान्त्रिक विधाजस्ता कार्यमा रुची राख्नु हुन्छ ।
तपाईं औषधि निर्माणमा रुची राख्नु हुन्छ । प्रयोगशालामा गरिने बिभिन्न प्रयोगमा तपाईंको रुची छ । मानव शरीर र मष्तिष्कबीच समन्वय गरी स्वस्थ मानव समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । नयाँ–नयाँ अन्वेषण गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने सोख छ । सानै कक्षादेखि गणित, बिज्ञान र अंग्रेजीमा राम्रो दखल छ ।
तपाईं अरुको कुरा भन्दा आफ्नो सृजनामा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ ।’ यदि यस्ता बिशेषता तपाईंसंग छन् र तपाईं यी कुरामा निर्धक्क हुनुहुन्छ भने बिज्ञान विषय क्षेत्र तपाईंको रोजाई हुन सक्छ । नर्स, चिकित्सक, ओभरसियर, इन्जिनियर, प्राणीशास्त्रविद, बनस्पतिशास्त्रविद, ज्योतिषविद, भूगर्भविद, मौसमविद, आयूर्बेद बिज्ञ, कम्प्युटर बिज्ञ आदि यस क्षेत्रका आकर्षण हुन् । संसारमा बैज्ञानिकको खाँचो पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । यस अर्थमा यसको बजार ठूलो छ ।
‘तपाईं प्रविधिक विषय पढेर तुरुन्तै बजारमा काम खोज्न जाने सुरसारमा हुनुहुन्छ । तपाईं प्रशासनिकभन्दा प्रविधिक काम गर्न रुचाउनु हुन्छ । बियाँ विषयमा रुची राख्नुहुन्छ । तपाईंको गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा सी वा त्यसभन्दा बढी ग्रेड छ ।
तपाईं पहिला जुनियर प्रविधिक तहको अनुभव बटुल्दै आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिंदै पछि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता हासिल गरेर बिज्ञ प्रविधिक बन्न आतुर हुनुहुन्छ ।’ यदि यस्तो हो भने कक्षा ११ र १२ मा पढाई हुने प्राविधिक विषय तपाईका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
यो विषय लिएर पढ्दा तपाईंलाई ४ वटा मध्ये एउटा छनौटको अवसर मिल्छ । ती हुन् पशु बिज्ञान र बाली बिज्ञान, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंङ, सिभिल इन्जिनियरिंङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिंङ । यीमध्ये तपाइको रुची र प्राप्त जिपिए निर्णायक हुन सक्छन् । यस्ता प्रविधिक विषय पढ्नेलाई कृषि, पशु सेवा, निर्माणसम्बन्धि परामर्श, कम्प्युटर प्रोग्रामिंङ, वेब डिजाइन, सफ्टवेयर निर्माण जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी पाउन सजिलो हुन्छ । यसको बजार ठुलो छ र तुरुन्तै बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।
तपाईं आफ्नो भविष्यको निर्माता हुनुहुन्छ । अभिभावक लगानीकर्ता हुन् । तपाईंको सोच परिपक्व बनाउन आफूभन्दा ठूला र अनुभवीसंग परामर्श गर्नुहोस् । तर निर्णयमा आफैं पुग्नुहोस् । फेरि कलेज छान्दा पूर्णकालीन शिक्षक छन् कि आंशिक ?
पूरा समय पढाउने कलेज हो कि ३ घन्टे कलेज ? सडक छेउमा डिस्टर्ब हुने खालको कलेज हो कि कम्पाउण्डसहित सुरक्षा प्रवन्ध गरिएको शान्त वातावरण ? एउटा भवनभित्र कलेज मात्रै चल्छ कि अरु ब्यापार गर्ने तला पनि संगै छन् ? बिद्यार्थी बिरामी परेका बेला कसरी हेरचाह गर्ने प्रबन्ध छ ? क्यान्टिन कस्तो छ झिंगा भन्कने, फोहोर वा स्वस्थकर ? खाली पढाई मात्र हुन्छ कि स्पोर्ट्स, म्युजिक पनि सिक्न पाइन्छ ?
कक्षामा नबुझेका कुरा सोध्न कक्षा बाहेकको समयमा शिक्षक उपलब्ध हुन्छन् कि हुँदैंनन् ? प्रिन्सिपल र शिक्षकले तपाईं र तपाईंका अभिभावकको कुरा सुन्छन् कि सुन्दैनन् ? कलेजभित्र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ कि छैन ? कक्षा कोठामा केवल लेक्चर मात्रै हुन्छ कि प्रविधिको प्रयोग ? पुस्तकालयमा कोर्स बाहेकका ज्ञानबद्र्धक अरू सामग्री छन् कि छैनन् ?
शिक्षक र प्रिन्सिपलसंग आफूलाई लागेका कुरा इमेल र फोनबाट व्यक्त गर्ने अनुमति छ कि छैन ? जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिएर र बुझेर मात्र कलेज रोज्नुहोस् । यो तपाइंको भविष्य हो । यसमा कलेजले खेलबाड गर्न पाउंदैन । गुणस्तर खोज्नुहोस न कि चिल्ला भवन र फर्निचर ।
लगानीमा बरु ५ रुपैयाँ बढी तिर्नुहोस् तर गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नुहोस । ‘तीन जना आए एक जना फ्री’ भन्ने कलेज कहिल्यै नछिर्नुहोस । यसले व्यापार गर्छ, गुणस्तर दिँदैन भन्ने बुझ्नुहोस् ।
आसा गरौं यसपालीको तपाईंको रोजाई सही होस् । तपाईंको भविष्य सुन्दर बनोस् । मेरो शुभकामना । -कान्तिपुरबाट
(0.012848 seconds )